ဗြဟ္မစိုရ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းကို (၆.၅.၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ မျက်စိအထူးကုသဆောင်အသစ် အလှူရှင်မှာ မန္တလေးမြို့မှ ဦးကာကာ+ဒေါ်စိန် (လက်ဖက်ခြောက် မိသားစု)တို့ ဖြစ်ပါသည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် အချိန်၌ စမ်းသပ် ကုသပေးခြင်းကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှ စတင်၍ ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်းကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဗြဟ္မစိုရ် မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း၌ မျက်မှန်ပါဝါစမ်းသပ်ပေးခြင်း၊ မျက်စိစမ်းသပ်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သော ဆေးဝါးကုသမှုများပေးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်းတို့အား အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းဖွင့်ရက်မှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၈ နာရီ မှ ၁၂ နာရီ ထိ ဖြစ်သည်။ အတွင်းတိမ်၊ ရေတိမ် အစရှိသည့် ခွဲစိတ်ရန်လိုအပ်သော ဝေဒနာရှင်များအား တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့များ၌ တစ်ရက်လျှင် လူနာ ၈ယာက်မှ ၁၆ယာက်ထိ ခွဲစိတ် ကုသပေးနေပါသည်။
ဗြဟ္မစိုရ် မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းတွင် ပညာဒါနပြု၍ ကုသပေးနေသော ဆရာဝန်ကြီးများမှာ Professor ဒေါက်တာ ဦးသိန်းထွန်း (မျက်စိဆေးရုံအုပ်) (ငြိမ်း)၊ ဒေါက်တာသန္တာအောင် (မျက်စိဆေးရုံ၊ မန္တလေး)၊ ဒေါက်တာအေးကျော့မောင် (မျက်စိဆေးရုံ၊ မန္တလေး)၊ ဒေါက်တာတင်သီတာအောင် (မျက်စိဆေးရုံ၊ မန္တလေး)၊ ဒေါက်တာနေလင်းထွန်း ၊ ဒေါက်တာညီညီဇော် (မျက်စိဆေးရုံ၊ မန္တလေး) တို့ ဖြစ်သည်။ Sister ဒေါ်ခင်သီ (သူနာပြုဆရာမကြီး (ငြိမ်း) ၊ မျက်စိဆေးရုံ ၊မန္တလေး)၊ Sister ဒေါ်ခင်ဝင်းမာ (တီဘီဆေးရုံ၊ မန္တလေး)၊ Sister ဒေါ်အေးအေးသန်း (သူနာပြုဆရာမကြီး၊ မျက်စိဆေးရုံ) တို့က ဗြဟ္မစိုရ်မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း၌ ပညာဒါနကုသိုလ်ပြုနေပါသည်။ အထက်တန်း သူနာပြုဆရာမများ၊ အကူသူနာပြုများ၊ လုပ်အားကုသိုလ်ပြုသူများစွာဖြင့် မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား အခမဲ့ ကုသပေးနေပါသည်။
ဗြဟ္မစိုရ် ကုသိုလ်ဖြစ်အထူးကုဆေးခန်း ကျောက်ကပ်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း
ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း ကုသိုလ်ဖြစ် အထူးဆေးကုသဆောင်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ စ၍ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအား ကျောက်ကပ်တုသန့်စင်ပေးခြင်း (ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း) လုပ်ငန်းကို ကျောက်ကပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာချောစုခိုင်နျင့် ဒေါက်တာကျော်သူရတို့က အနီးကပ် ကြီးကြပ်၍ ကုသပေးလျက်ရှိရာ
၁။ ၄ကြိမ် ကုသပေးပြီးသူ ၂ ဦး
၂။ ၃ကြိမ် ကုသပေးပြီးသူ ၆ ဦး
၃။ ၂ကြိမ် ကုသပေးပြီးသူ ၁၀ ဦး
၄။ ၁ ကြိမ် ကုသပေးပြီးသူ ၁၃ဦး အောက်တိုဘာလတွင် စုစုပေါင်း လူနာ ၃၁ ဦးအား ၊ ၅၉ ကြိမ်အထိ ကျောက်ကပ်တု သန့်စင်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးနှင့် C ပိုးဝေဒနာရှင်များအား ကုသမှု စတင် ။
ဘီပိုးနှင့် စီပိုးဝေဒနာရှင်များ ၂၅-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ဗြဟ္မစိုရ်ကုသိုလ်ဖြစ် အထူးကု ဆေးပေးခန်းတွင်ကုသပေးမည်။
ဗြဟ္မစိုရ် လူမှုကူညီရေး မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းမှ ကုသိုလ်ဖြစ် မျက်စိစမ်းသပ်ပေးခြင်း (၁၈. ၁၀. ၂၀၁၄)
Colloidian Baby မောင်စိုင်းခန့်မောင်
ဗြဟ္မစိုရ် ကုသိုလ်ဖြစ် အထူးကုဆေးခန်းကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့မှာ မြင်းမူမြို့၊မဲနှောရွာက အသက် ၇ လ အရွယ်ရှိ မောင်စိုင်းခန့်မောင်က အရေပြားအနာဖြစ်လို့လာရောက်ကုသတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒီကလေးဟာ မွေးပြီးတလလောက်ကစပြီး တကိုယ်လုံးကအရေပြားတွေ ပါးလွှာလာပြီးဝက်အူချောင်းအမြှေးပါးလိုဖြစ်လာတယ်။မွေးရာပါရောဂါဖြစ်တယ်။ ဆေးရုံတက်ဖို့ စရိတ်မရှိလို့ ဗြဟ္မစိုရ်ကိုအကူအညီလာယူတာဖြစ်ပါတယ်။
မောင်ဖိုးသောကြာ (၇) လ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသရန်အတွက် အလှူရှင် လိုအပ်နေပါသည်
ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း၏ သွေးလှူဒါန်းပွဲ မှတ်တမ်းပုံများ
Time : 04:38 (pm)